Umkhiqizi we-China Quality Cable Wall Plate, Factory - Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Ikhaya > Imikhiqizo > Ikhebula Wall Plate
Ipulangwe le-Dual HDMI Wall
Ama-Connexions ngumkhiqizi ohola phambili wePlastiki Wall Plates onolwazi olunzulu ngaphezu kweminyaka eyi-17. Le Dual HDMI Wall Plate izixhumi zesitayela se-coupler zinikeza ukuxhumana okulula ngaphambili nangasemuva kokuhambisana kwepuleti lodonga kuze kufike kunguqulo ye-HDMI.
I-HDMI ne-COAX Wall plate
Ama-Connexions ngumkhiqizi ohola phambili wePlastiki Wall Plates onolwazi olunzulu ngaphezu kweminyaka eyi-17. Le HDMI + Coax Combo Wall Plate izolisusa ngokuphelele iqoqo lezintambo futhi izifihle ngemuva kodonga futhi ilungele ukufakwa kwe-HDTV & wall mount netiyetha lasekhaya.
Ama-Connexions ngumkhiqizi ohola phambili wePlastiki Wall Plates onolwazi olunzulu ngaphezu kweminyaka eyi-17. Le HDMI + RCA Wall Plate izolisusa ngokuphelele iqoqo lezintambo futhi izifihle ngemuva kodonga futhi ilungele ukufakwa kwe-HDTV nokufakwa kodonga netiyetha lasekhaya. Amapuleti ethu odonga epulasitiki abethunyelwa e-US nase-Europe ngamasheya amakhulu emakethe. Besilokhu sizinikela ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nokuhlinzekwa kwamakhasimende okuhle kakhulu. Yonke imikhiqizo yenziwa ngaphansi kohlelo lokuphathwa kwekhwalithi le-ISO9001 futhi i-100% ihlolwe ngaphambi kokuthunyelwa. Ama-connexions azoba ngumenzi wakho obambisene naye wesikhathi eside eChina.
I-HDMI RCA Wall Plate
Ama-Connexions ngumkhiqizi ohola phambili wePlastiki Wall Plates onolwazi olunzulu ngaphezu kweminyaka eyi-17. Le HDMI + RCA Wall Plate izolisusa ngokuphelele iqoqo lezintambo futhi izifihle ngemuva kodonga futhi ilungele ukufakwa kwe-HDTV nokufakwa kodonga netiyetha lasekhaya.
Singabakhiqizi nabahlinzeki be- Ikhebula Wall Plate abaqeqeshiwe e-China, abakhethekile ekunikezeni insizakalo eyenziwe ngezifiso. Uma uzothenga ikhwalithi ephezulu ye- Ikhebula Wall Plate esitokweni, wamukelekile ukuthola ikhotheshini efektri yethu.